ओली सरकारका मन्त्री कस्ता ? मानव तस्करीका अभियुक्त नारदमुनी जस्ता !
10th June, 2021 Thu १७:३१:०८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेकपा एमालेको तर्फबाट कैलाली-५ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् नारदमुनी राना । उनी आज केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका छन् ।
ओली नेतृत्व सरकारमा अहिले राना चर्चामा छन् । चर्चा नहोस् पनि कसरी, कुनै बेलाका रातो पासपोर्ट दुरूपयोग मुद्दाका अभियुक्तलाई मन्त्रत्ती बनाएपछि ।
२०६४ सालमा पनि राना संविधानसभा सदस्य थिए । त्यतिबेला उनले रातो पासपोर्ट लिएका थिए । रातो पासपोर्ट दुरूपयोग प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दाका अभियुक्त मध्येका पूर्वसभासदहरू शिवपुजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई विषेश अदालतले दोषी ठहर गरी तीन महिना कैद र जनही १५ हजार जरिवाना तिराउने फैसला गरेको थियो । अख्तियारले भने यादव र साहले १ करोड ६२ लाखमा राहदानी बेचेर मानव तस्करी गरेको अभियोग थियो ।
रानालाई ०६८ असारमा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेपछि उनलाइ एमालेले तत्कालीन सभासद् रानालाई पार्टीले सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको थियो ।
तर रानालाई २०७२ साउन २६ गते विशेष अदालतले रानालाई सफाइ दियो । तर सफाइ दिएउपछि ०७२ चैतमा असन्तुष्ट हुँदै उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । अहिले रानाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
उनको राहदानीको फोटो परिवर्तन गरेर ११ डिसेम्बर २०१० मा म्याग्दीका निर्मल बानियाँ अस्ट्रेलिया उडेका थिए ।